Kidnapping teny Ivandry : Tafaverina eny anivon’ny fianakaviany i Sabira Vasram -
AccueilSongandinaKidnapping teny Ivandry : Tafaverina eny anivon’ny fianakaviany i Sabira Vasram
Kidnapping teny Ivandry : Tafaverina eny anivon’ny fianakaviany i Sabira Vasram
Araka ny loharanom-baovao avy eo anivon’ny fianakaviamben’ny karana mizaka ny zom-pirenena frantsay eto Madagasikara na ny Cfoim, dia fantatra fa navotsotr’ireo jiolahy mpaka an-keriny ny sabotsy hariva lasa teo tokony ho tamin’ny 07 ora sy sasany i Sabira Vasram, vehivavy mpandraharaha karana manodidina ny 50 taona nisy naka an-keriny teny Ivandry ny zoma, tokony ho tamin’ny 12 ora sy sasany antoandro. Araka ny voalaza, dia teny amin’ny lalan’i Digue ity niharan-doza, izay naratra mafy sy hita ho rera-batana ity no navelan’ireo olon-dratsy. Fantatra ihany koa fa nisy ny fandoavana vola ho takalon’ny fahafahany, saingy tsy mbola nahazoam-baovao ny totalin’izany hatreto. Tsy hita popoka ary mbola tsy fantatra kosa ny mahakasika ireo jiolahy, saingy nanao fanambarana ny teo anivon’ny polisim-pirenena sy ny zandarimariam-pirenena fa efa nisy ny fandraisan’andraikitra nataon’izy ireo manoloana iny tranga iny, ary niainga tamin’ny fitsirihina ny laharan’ny fiara nampiasain’ireo jiolahy ny fanadihadiana. Raha tsiahivina ny zava-nisy, dia handeha hametraka ny fiarany teny akaikin’ny “Pullman” teny Ivandry ity karana mpandraharaha ity no novakiana dimy lahy nirongo basy tamin’ny maritoa ny fitaratra teo aloha mifanandrify azy, ary teo no namoahana sy nahafahan’ireo olon-dratsy naka an-keriny ity farany. Nentin’ireo jiolahy tamin’ny fiara 4×4 “vitre fumée” nampiasain’izy ireo ity niharan-doza ity taorian’izay. Niezaka nanidy ny vavahady miditra sy mivoaka teny an-toerana moa ireo mpitandro filaminana, saingy nambanan’izy dimy ireo ny basy ka tsy afa-nanoatra. Tsy nisy nahasahy nanakana ihany koa ireo olona rehetra nanatri-maso ny zava-niseho noho ny fatahorana ny mety afitsok’ireo mpanao kidnapping.
Sambany no nisy vehivavy karana niharan’ity asa ratsy ity teto an-drenivohitra, ary faninenina tamin’ireo lasibatr’izany tamin’ity taona ity ny tenany. Vao ny alakamisy lasa teo ihany koa no nisian’ ilay karana lehilahy mpanao fanaka niharan’ity asa ratsy ity tany amin’ny Village Touristique Mahajanga izay afaka nitsoaka ny androtr’iny ihany. Raha hiverenana kely ihany koa, dia vao andro vitsivitsy lasa izay no navotsotr’ireo mpaka an-keriny tany Toamasina i Nizar Pirbhay, rehefa notazonin’ireo jiolahy nandritra ny 26 andro. Araka ny tatitra avy eo anivon’ny Cfoim hatrany, dia efa mihoatra ny 113 ny isan’ireo karana niharan’ny kidnapping nanomboka ny taona 1991. Hahitana zaza mbola tsy ampy taona sy mbola mpianatra , toa andr’i Firoze Nirbhay sy ry Nathan Andriantsitohaina ao anatin’io salan’isa io , ary teo ihany koa ireo karana mpandraharaha efa somary lehibe raha tsy hilaza afa-tsy ny tompon’ny “bijouterie” Kalidas etsy Andohan’Analakely izay efa mahatratra hatrany amin’ny 70 taona. Ny tatitra avy eo anivon’ny “Cellule mixte “etsy amin’ny Toby Ratsimandrava etsy Andrefanambohijanahary indray no nahafantarana fa olona miisa 24 no efa natolotra ny fampanoavana sy naiditra am-ponja nanomboka tamin’ny volana novambra 2017, ary efa nisy tamin’ireo fitaovana nampiasain’ireo mpanao ity asa ratsy ity ihany koa no efa nogiazana. Ireto farany moa dia miantso, ary manantena hatrany ny fiaraha-miasa amin’ireo vahoaka tsy an-kanavaka mba hifanome tanana amin’izy ireo eo amin’ny lafin’ny fanomezam-baovao, mba ahafahana manena na mamongotra mihitsy ity asa ratsy izay nisesisesy loatra ity.
Nametra-panontanina hatrany isika teto amin’ny gazety hoe: « iza ihany izao mila vola be amin’ity resaka kidnapping ity izao?”. Mirongatra tokoa mantsy ny fakàna an-keriny teratany Karana, na kidnapping isaka ny fotoam-pifidianana… Kidnapping miisa sivy ...Tohiny